Copy of Introduction | Abba's Home
Fampidirana ny Efesiana
Fizotry ny Tantara
Dia misionera fahatelo naton’i Paoly
Nosamborina i Paoly, manoratra ny Efesiana
Mpanoratra, Daty, sy Mpandray
Nanoratra ny taratasy ho an’ny fiangonan’ny Efesosy sy ny faritra manodidina c. A.D. 62, i Paoly tamin’izy nigadra tany Roma (Asan'ny Apostoly 28). Nanoratra ny Kolosiana sy Filemona koa izy, nandritra io fotoana io. Nalefa niaraka tamin’i Tykiko sy Onesimosy ny taratasy telo.
Misy lohahevitra 3 lehibe ao amin ny Efesiana:
(1) Nampihavana ny fahariana rehetra taminy sy tamin’Andriamanitra i Kristy;
(2) Nampiray ny olony avy amin’ny firenen-drehetra taminy, i Kristy, sy nampiray azy ireo ao amin’ny fiangonany; ary
(3) tsy maintsy miaina araka ny maha olom-baovao azy ny kristianina.
Manome toro-làlana amin’ny ankapobeny ny amin’y fahamarinan’ny asa-pamonjen’Andriamanitra ao amin’i Kristy; ny firaisan-kinan’ny fiangonana anatin’ny olona samihafa; ny fitondran-tena mety ao am-piangonana, ao an-tokantrano, eo amin’ izao tontolo izao ny Efesiana.
Maty ara-panahy avokoa ny olona rehetra. Nandika ny lalàn’Andriamanitra izy ireo ka eo ambany fifehezan’i Satana (1:7; 2:1–3, 5, 11–12).
Mandahatra mialoha ny fanavotana ny olony Andriamanitra sy ny fahamasinana ao amin’ny Kristy (1:3–14; 2:4, 8–9).
Namonjy ny mpanota ny famindram-pon’Andriamanitra ao amin’i Kristy. Noho ny fahasoavana avy amin’ny finoana irery ihany izany fanomezana maimaim-poana izany. (1:7–8; 2:4–14).
Fanavotana ny fahariana lavo, ho an’Andriamanitra ny asa-pamonjena nataon’i Jesosy. Mendrika ny voninahitra, ny haja, ny fanapahana amin’ity vanim-potoana ity sy ny ho avy Izy (1:15–23; 3:1–13).
Mampiray ny Jiosy sy ny jentilisa ao amin’ny vatany, dia ny fiangonana izany, amin’ny maha-olom-baovao azy, i Jesosy (1:23; 2:10–22; 3:1–21; 4:1–6).
Voavonjy ho amin’ny fiainam-baovao anatin’ny fahamasinana amin’ny fisainana, fiteny, sy fanao ny olon’i Kristy. Mila manilika ny fomba fiainana anatin’ny fahotana taloha izy ireo. (4:1–3, 17–32; 5:1–20).
Anisan’ny fahamasinana ny fankatoavana tsara ny fahefana ao an-tokantrano, ankohonana, eo amin’ny fiainana, ary mila mikarakara ireo mankato azy ireo manam-pahefana. (5:21–6:9).
VIII.Nanome fanomeza-pahasoavana mahery vaika ny fiangonany, i Jesosy. Mitondra firaisan-kina, fahamatorana, ary fiarovana amin’ny devoly sy ny forongony izany 4:7–16; 6:10–19).
Vavaka fisaorana nataon’i Paoly(1:15–23)
Fahasoavana no amonjena amin’ny alalan’ny finoana (2:1–10)
Firaisan-kina sy ny fiadanan’i Kristy (2:11–22)
Fanambarana ny zava-miafin’ny Filazantsara (3:1–13)
Vavak’i Paoly mba hahery sy hahiran-tsaina (3:14–21)
Firaisan’ny vatan’i Kristy (4:1–16)
VIII.Fijoroana vavolombelona nataon’i Paoly (4:17–24)
Famporisihana hiaina fiainam-pahamasinana (4:25–32)
Fiainam-baovao am-pitiavana (5:1–20)
Fankatoavana eo amin’ny tsirairay (5:21–6:9)
Ny fiadian’Andriamanitra (6:10–20)
Faritra manodidina ny Efesiana
Tanan-dehibe mpanan-karena, manamorona seranan-tsambo, amin’ny faritra Romana, any Azia i Efesosy. Ivon-toeran’ny fanabeazana izany; eo akaikin’ny làlan-dehibe maromaro. Angamba nanoratra ny taratasiny ho an’ny Efesiana i Paoly tamin’izy niharan’ny tsy fahafahana mivoaka ny trano tany Roma (Asa 28).